Meksika: Herisetra mifandraika amin’ny zava-mahadomelina ao Tijuana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2018 14:09 GMT
Nanjaka manerana ny firenena ny herisetra teo amin'ny manampahefana Meksikana sy ireo mpikambana ao amin'ny fikambanan-jiolahy matanjaka amin'ny zava-mahadomelina ka namoizana aina marobe sy fiarahamonina mahatsapa ho tsy mahavita azy. Niezaka nanakana ny fitomboan'ny herisetra ny governemanta Meksikana tamin'ny alàlan'ny fandefasana polisy federaly sy miaramila any amin'ireo faritra tena voakasika indrindra. Ny polisy, ireo dahalon'ny zava-mahadomelina ary ireo niharam-boina tsy manan-tsiny no loha-laharana eny an-tany fiadiana. Malahelo ireo bilaogera Meksikana sasany noho ity herisetra feno habibiana ity, ary matetika lasa manontany tena ny amin'ny fomba hiatrehana ny vokany. Franc Contreras, mpitati-baovao solontenan'ny Al-Jazeera nandefa ny tatitrany tao amin'ny bilaoginy manokana Mexico Monitor.
Ny 17 Janoary, nitohy ny herisetra tany Tijuana, akaikin'ny sisin-tanin'i Etazonia-Meksika, izay nahitana olona nalaina an-keriny 6 sy ahiahiana 1 namoy ny ainy. Nandefa lahatsary roa avy amin'ny fahitalavitra Meksikana ny bilaogy Zacatekas [es] izay ahitana lahatsary mampivarahontsana misy ny tifitifitra. Mampiseho ny fomba namoahana ireo ankizy ihany koa ny lahatsary. Nialohavan'ny loza hafa tany am-piandohan'ny herinandro izay nahafaty polisy iray voatifitra ity herisetra ity. Milaza ny tatitra sasany fa nampiasa grenady atosiky ny balafomanga sy basy matanjaka ireo mpikambana ao amin'ny fikambanan-drongony.
Daniel Hernandez, mpanoratra monina ao Mexico City, manoratra ao amin'ny bilaoginy Intersections momba ny herisetra tsy voafehy ao amin'ny firenena, sy ny fiantraikany goavana ao amin'ny tanàna sisin-tany.
Rafa Saavedra avy ao amin'ny Cross Fader Network [es] sady mponina ao Tijuana namoaka ny valinteniny tamin'ny fanontaniana napetraky ny gazety El Universal taminy. Tsy navoaka tao amin'ny gazety ny valinteniny, saingy nanome ny heviny momba ny herisetra kosa i Saavedra.
Hernandez manohy miresaka ny fiantraikan'ny herisetra ao amin'ny faritra.
Sucks for Tijuana, a city trying to enjoy its cultural and culinary renaissance. Now it seems my ancestral tierra is being defeated in spirit by a wild and bloody narco war — between the government and the cartels, between the cartels themselves — that claims many more victims than it does any readable successes or setbacks.
Miondrika ho an'i Tijuana, tanàna iray miezaka mankafy ny fanavaozana ara-kolontsaina sy ara-tsakafo. Ankehitriny, toa resy ara-panahy ny tierra razambeko noho ny ady goavana sy mihoso-drà ateraky ny ady amin'ny zava-mahadomelina — ifanaovan'ny governemanta sy ny dahalon-drongony, sy eo amin'ireo samy dahalon-drongony ihany koa — izay niteraka fahafatesan'olona maro kokoa fa tsy fahombiazana na fahavoazana mazava.
Farany, bilaogera Borderlandia tsy manana fanantenana loatra momba ny toe-draharaha ao Meksika mikasika ny herisetra mifandraika amin'ny rongony ary manoratra hoe: “Mirodana tsikelikely ny firenena, Reraka ireo andrim-panjakana.”